Momba anay - Hebei Joyroll Conveyor Machinery Co., Ltd.
Izahay dia manantitrantitra ny politikan'ny kalitaon'ny "Ny kalitao no fiainanay, ny lazanay no ho avinay, ny fahafaham-po no tadiavinay, ny fanatsarana no tanjonay", ary ny antoka hanome ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay.
Hebei Joyroll Conveyor Machinery Co., Ltd.naorina tamin'ny 2008, dia mpanamboatra matihanina amin'ny fehikibo conveyor sy ny faritra. Ny orinasa misy anay dia miorina amin'ny valan-javaboahary feixiang, tanànan'ny tanana, faritany hebei, Sina, manarona 33000 metatra toradroa. Ny orinasan-tsika dia manana tsipika famokarana mandeha ho azy mandroso iraisam-pirenena mandroso iraisampirenena, mandroso tsipika famokarana vovoka elektrostatika mandroso, ary fitaovana fitiliana mpandeha feno mpanera isan-karazany, fahafaha-manao famokarana isan-taona 600.000 pcs mpampita hivezivezy. Afaka mamokatra karazana standard TD75 sinoa sy karazana roller DT II isika, koa afaka mamokatra rantsana mpivezivezy arakaraka ny fenitra iraisam-pirenena, toa ny DIN, AS, JIS, CEMA, SANS-SABS, GOST, AFNOR sns. fanoherana mihodina, porofo vovoka, porofon-drano, tabataba ambany, fantsakana mihodina, fitsitsiana angovo, serivisy lava mandritra ny 50,000 ora.
Ny haavon'ny teknolojia famokarana Joyroll sy ny kalitaon'ny vokatra dia nahazo fankatoavana ny mpanjifa tao an-trano sy tany ivelany, ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny arina, fitrandrahana, seranan-tsambo, fananganana, famotoana vy, famokarana herinaratra elektrika ary sehatra hafa, ary aondrana any Alemana, Aostralia, Russia , Afrika Atsimo, Brezila, Indonezia sns, firenena sy faritra 50 mahery.